Nhau - Hunhu uye kupatsanurwa kweiyo yekucheka reza / yekucheka disc, iyo chiyero chekushandisa kweiyo yekucheka reza.
Hunhu uye kupatsanura kweiyo yekucheka reza / yekucheka disc, iyo chiyero chekushandiswa kweiyo yekucheka reza.
Hunhu uye kupatsanura kweiyo yekucheka reza / yekucheka disc, iyo chiyero chekushandiswa kweiyo yekucheka reza:
Muhupenyu hwezuva nezuva, kana tikazviteerera, kazhinji kune nzira yekucheka mukushongedza kwemusha. Inocheka pasi, simbi, huni, kana zvimwe zvinhu kune chimiro chaunoda. Kune iyo simbi yekugadzira indasitiri, simbi yekucheka muchina inofanirwa, asi zvakare mhando yekucheka muchina ine simba kugona parizvino. Mabrasives ayo ari kucheka zvidimbu. Zvinhu zvakashata zvezvidimbu zvekucheka zvinoratidza kuti ndezvekugaya mavhiri. Zvinhu zvavo zvikuru ndezvimabrasives uye binder resins. Chavo chikuru basa kutema zvakajairika simbi, isina simbi simbi uye isiri-yesimbi zvigadzirwa kuti uwane yaunoda yekucheka maitiro. Chimiro chayo ishiti yakatenderera yakatetepa.
Kucheka chipande maitiro
Iko kusarudzwa kwezvinhu zvebanga rekucheka zvine hunhu hwayo, kunyanya girazi fiber uye nebwe. Izvi zvinhu zviviri zvinoshandiswa kugadzira zvakasimbiswa zvekubatanidza zvinhu. Zvigadzirwa zvakapedzwa zvemhando yepamusoro, yakasimba tensile simba, kukanganisa kusagadzikana uye kukotama simba. Ivo anoshandiswa zvakanyanya mukugadzira uye kuvhara kweyakajairika simbi, isina simbi simbi, simbi uye isiri-simbi. Iyo yakasarudzika kusarudzwa kwezvinhu uye iyo yakasarudzika tekinoroji inovimbisa iyo yakakwira yekucheka kugona kweyekucheka zvidimbu kuzvinhu zvekucheka.
Zvinoenderana neshoko, kucheka disc kunonyanya kuve kwakakamurwa kuita fiber resin yekucheka zvidimbu uye mangoda ekucheka zvidimbu.
1. Iyo resin yekucheka blade yakagadzirwa neresini, inosanganiswa nemhando dzakasiyana dzezvinhu zvakasiyana. Inonyanya kushandiswa mune alloy simbi, simbi isina chinhu uye zvimwe zvakaoma zvekucheka zvinhu, uye yayo yekucheka mashandiro inonyanya kukosha. Kana ichicheka, inogona kuganhurwa mumhando mbiri, kusanganisira yakaoma yekucheka uye nyoro kucheka. Rudzi urwu rwekucheka blade inofanirwa kushandisa yakatsiga chaiyo. Uyezve, zvinoenderana nezvinodiwa zvekucheka, izvo zvinhu uye kuomarara kwechidimbu chekucheka zvinosarudzwa, izvo zvinogona kuvandudza zvakanyanya kugona kwekuchengetedza nekuchengetedza mutengo.
2. Dhaimondi rinocheka banga. Ichi zvakare chishandiso chekucheka, icho chinogona kuonwa kazhinji muindasitiri yekuvaka, saka mhando iyi yekucheka chidimbu chinoshandiswa zvakanyanya mukugadzirisa kwezvinhu zvakaoma uye zvinopwanyika zvakaita sedombo, kongiri, migwagwa mitsva neyekare, ceramics, nezvimwe. yakanakisa yedhaimani yekucheka banga inowanzo kuve nezvikamu zviviri: substrate uye cutter musoro. Iyo matrix ndiyo inonyanya kutsigira chikamu, icho chinoshandiswawo kusunga musoro wemucheka, nepo madhaimani edhimoni akaputirwa nesimbi mukati memusoro wemutema. Musoro wekucheka unonyanya kushandiswa mukucheka, nekuti inowanzo cheka, saka musoro wekucheka uchashandiswa mukushandisa, asi matrix haizove nekurasikirwa. Ehe, iyo yekucheka musoro inoita basa rekucheka nekuti ine dhaimondi. Dhaimondi ndicho chinhu chakaomesesa chinowanikwa pari zvino. Kana ikakwiza chinhu chatinoda kucheka mumusoro unocheka, chinozocheka chinhu.